Lenovo Folio, kani waa kaniiniga isku laaban Lenovo | Androidsis
Lenovo Folio, kani waa kiniin isku laabma Lenovo
Alfonso ee Miraha | | Lenovo, Kiniiniyada Android
Shaashadaha isku laaban ayaa soo dhowaanaya. Waxaan dhamaanteen rajeyneynaa in Samsung ama LG ay noqon doonaan soo saarayaasha ugu horeeya ee soo saara qalab nuucaan ah laakiin waxay umuuqataa taas Lenovo waxaad dooneysaa inaad ka soo hormarto.
Waana sanadkii la soo dhaafey, intii lagu guda jirey Lenovo World Tech, soo saaraha wuxuu muujiyey nooc ka mid ah kaniiniga oo leh shaashad isku laaban, Lenovo Folio, oo ay ku jiraan fiidiyow ka socda YouTuber Meghan McCarthy. Waxayna umuuqataa inaysan ahayn kaliya tusaalooyin.
Lenovo wuxuu soo bandhigi karaa kaniiniga ugu horeeya oo leh shaashad isku laaban
Ilaa maanta, shirkaddu waxay sii wadaa inay ka shaqeyso sidii ay kiniinkeeda isku laaban u noqon lahayd mid dhab ah. Magaca Lenovo Folio, soo saaraha ayaa ka faa'iideystay Lenovo Tech World 2017 si loo muujiyo fikraddan oo ah in maalin kasta ay ku dhowdahay qaab ganacsi.
Waxaan ka hadlaynaa qalab leh a shaashad jilicsan oo u dhexeysa 5.5 iyo 7.8 inji iyo xalka 1440 x 1920. Daboolka hoostiisa waxaan ka helnay processor Qualcomm Snapdragon 800, oo ah processor xoogaa duug ah tan iyo markii la soo saaray sanadkii 2013 laakiin wali ah SoC aad u awood badan.
Tan waa inaan ku darnaa a e-SIM iyo Android 7.0 N gacanta hoosteeda. Waa in la xusuusnaado in aaladdan xilligan la joogo ay tahay fikrad iyo inay weli lagama maarmaan tahay in la arko nooc ganacsi, laakiin waxay umuuqataa inay ku sii dhowaanayso
Fiidiyowga qeybta sare ee maqaalka waxaad ku arki doontaa sida Kiniin laabma Lenovo, aalad runtii aad ufiican oofiican. Dabcan, waa in lagu xisaabtamo in nooca ganacsiga uu hubaal leeyahay noocyo kale oo astaamo farsamo ah, gaar ahaan arrinta processor-ka.
Ma aqaano in Lenovo ugu dambayntii noqon doono soo saaraha ugu horeeya ee soo bandhiga qalab noocan ah, laakiin waxa iska cad waa inaan ku sii dhowaanayno ugu dambayntii aragtida sdhab ah iyo ganacsi ama 'kiniin leh shaashad jilicsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Lenovo » Lenovo Folio, kani waa kiniin isku laabma Lenovo
Doogee Y6 MAX 3D guusha ayaa ah?
Gonzalez Jhon dijo
Haa, ma dhaheen guuleystaha taleefanka casriga ah!? maxaa dhacay?
Jawaab González Jhon
Sidee caqli daro ah. Waa maxay shaashad yar oo qiimo leh marka lagu daro aragtida sida ay u qaro weyn tahay. Waa qaali hadiyad ahaan. LG iyo Samsung way joojiyeen mashaariicdoodii ee been dambe ha sheegin.
Ku jawaab Rodo
Hel Samsung Galaxy S8 gebi ahaanba bilaash ah